အရည်လေတပ် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာထကျ သာ. ကောငျးအေး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အန္တရာယ်အရည်အေးနေသည်,Air ကိုထကျ သာ. ကောငျးအရည်အေးနေသည်,Install လုပ်ဖို့ခက်အရည်အေးနေသည်
Home > ထုတ်ကုန်များ > Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ > Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ > အရည်လေတပ် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာထကျ သာ. ကောငျးအေး
အန္တရာယ်အရည်အေးနေသည် Air ကိုထကျ သာ. ကောငျးအရည်အေးနေသည် Install လုပ်ဖို့ခက်အရည်အေးနေသည် အသံတိတ်အရည်အေးနေသည် အဘယ်အရာကိုအရည်အေးနေသည် သာ. ကောင်း၏အရည်အေးနေသည် ကို Safe အရည်အေးနေသည် Poco အတွက်အရည်အအေးခံခြင်း